3 Siyaabaha Delete iPhone Data oo aan laga badinin jailbreak .
Jailbroken iPhone aad faa'iido u badan. Waxaad adduunka ka mid ah Chine oo aan la heli karin in Apple App Store, gasho nidaamka macruufka ah soo bixi kartaa, oo bedeli karo bixiyaha wireless. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hal wax oo aad qabto in ay la kulmaan, mar kasta oo aad u baahan tahay in la soo celiyo aad iPhone, muuqaalada JAILBREAK waxaa lagu lumin doonaa. Si kastaba ha ahaatee, TT dhib badan ma ahan in ay tirtirto xogta iPhone haddii aad leedahay macluumaad badan oo shakhsi aad iPhone. Ha welwelin ku saabsan. Waxaa jira wali workarounds in ay tirtirto xogta iPhone oo aan laga badinin JAILBREAK Fiiri soo socda 3 siyaabo fudud in ay tirtirto iPhone (taageeraya macruufka 9) xogta aan laga badinin JAILBREAK.
Xalka 1: Mid ka mid ah click in masixi xogta iPhone aad oo aan laga badinin JAILBREAK (xoog leh lagula taliyey)
Xalka 2: Ha ogolaan in xogta iPhone aad oo aan laga badinin JAILBREAK (Keliya ee macruufka 5.0-6.1.2)
Xalka 3: Delete xogta iPhone oo aan laga badinin JAILBREAK (isticmaalaya app iPhone ah)
Xalka 1: Mid ka mid ah click in masixi xogta iPhone aad oo aan laga badinin JAILBREAK
Ma aha in aad noqon casriga ah ugu xeel dheer si ay u ogaadaan sida ay u masixi xog ku saabsan iPhone a jailbroken. Shuruudaha looga baahan yahay oo keliya in aad u tahay inuu kala xusho qalab ku haboon in laga sameeyo hawsha aad u. Wondershare SafeEraser ama Wondershare SafeEraser u Mac gelineya inaad masixi files junk, xogta gaarka ah ama dhammaan xogta ku saabsan jailbroken iPhone oo aan laga badinin JAILBREAK. Waxaa si buuxda la jaan qaada iPhone 6s (Plus), 6 (Plus), 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iyo iPhone 4s socda ee macruufka dambeeyay 9. Waxaad ku soo bixi kartaa inay leeyihiin isku day ah. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fudud u masixi xogta iPhone la barnaamijkan.
Download version saxda ah ee Wondershare SafeEraser for your computer. Waxaa Launch iyo xirmaan your computer aad iPhone via cable USB ah.
Tallaabada 2 xogta masixi iPhone oo aan laga badinin JAILBREAK
In uu furmo suuqa hoose, dhammaan muuqaalada u qalab ku qoran yihiin. Waxaad u isticmaali kartaa si masixi files junk, xogta gaarka ah, files tirtiray ama wax kasta oo xogta ku saabsan iPhone. Dooro feature saxda ah ee aad u baahan tahay.
Masixi Xogta Gaarka ah: khasnado Safari, taariikhda Safari, cookies Safari, khasnado keyboard, fariin, lifaaqyada fariin, wac taariikhda, qoraalo, sawiro, iwm
Masixi tirtiray Files: farriimaha, iMessage, xiriirada, wac taariikhda, facetime, jadwalka taariikhda, xusuusinta, qoraalo, Bookmarks Safari, sawiro, videos, iyo wixii la mid ah.
Masixi All Data: masixi dhammaan xogta ku saabsan iPhone, dhacna sida telefoonka cusub
Xalka wuxuu ku salaysan yahay Semi-Celinta , oo waxa kaliya ee macruufka 5.0-6.1.2. Haddii aad isticmaalayso versions kale macruufka, fadlan hana raacina buugan. Waxaad ku soo bixi kartaa adigoo gujinaya link la siiyay ka hor.
Tallaabada 1. siibka baakadka in aad soo bixi oo ay maamulaan joogo file EXE ku dhex jira.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone in computer iyo sug in mudo ah, ilaa barnaamijka waxa lagu ogaadaa.
Talaabada 3 . Riix badhanka midig ee bar horumarka iyo shaqada soo socda sharaxaad ku sameeyo.
Tallaabada 4. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, adiga iPhone la reboot doonaa dhowr jeer ah. Marka ay dhamaato, waxaad heli kartaa iPhone ah oo nadiif ah oo xogta lahayn, laakiin ka dhawrsan jailbroken macruufka.
Xalka 3: Delete xogta iPhone oo aan laga badinin JAILBREAK (uun u iPhone ah jailbroken)
Haddii aad raadineyso weeyna app ah ka shaqeeya aad iPhone, waxaad isku dayi kartaa iLEX RAT , kaas oo lagala soo bixi karaa dukaanka Cydia. Waxyaabaha aad ogaanaysid Waa waa in app waxay kaa caawin kartaa in la tirtiro dhammaan xogta laakiin barnaamijyadooda stock iyo xogta ka jailbroken iPhone, laakiin waxa aanu aad asalka JAILBREAK. Haddii tani ay tahay waxa aad u baahan tahay, fadlan horay.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi RAT iLEX ku saabsan iPhone ka dukaanka Cydia.
Tallaabada 2. Markaas aad u baahan tahay si aad u ogaato iyo rakibi MobileTerminal aad iPhone, waxa baadi dukaanka Cydia.
Tallaabada 3. Respring aad iPhone oo ay maamulaan MobileTerminal.
Tallaabada 4. Nooca rat degaanka amarka. Markaas liis dheer oo fursado loo soo bandhigi doono. Si aad u tirtirto xogta iPhone aad, waxaad dooran kartaa ikhtiyaarka 12.
Tallaabada 5. Xaqiiji doorashada adigoo gujinaya HAA markii qalab la waydiisanayo aad loo xaqiijiyo.
Tallaabada 6. Sug habka dhammayn, oo reboot aad iPhone markii ay keentay in ay sidaa u sameeyaan.
Marka iPhone waa reboot, ku dhowaad wixii dul saaran ayaa la tirtiray marka laga reebo RAT iLEX iyo barnaamijyadooda stock.
iPhone Software Recovery Text
Sida loo Delete Videos ka iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado iPhone tirtiray Photos
> Resource > masixi > 3 Siyaabaha Delete iPhone Data oo aan laga badinin jailbreak